TASC ကဘာလဲ? သငျသညျ TASC အကြောင်းကိုသိရန်လိုအပ်သမျှကိုလေ့လာပါ | USAHello | USAHello
TASC isadiploma that shows that you have the same knowledge as someone who completed high school in the USA. Passing your TASC test can help you be more successful. သငျသညျပိုကောင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုရဖို့အသုံးပွုနိုငျနှင့်ကောလိပ်ကျောင်းကိုသွား.
TASC သင့်ရဲ့နားလည်မှုနှင့်အသိပညာတစ်ခုစမ်းသပ်ဖြစ်ပါသည်. နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. TASC စမ်းသပ်ခြင်းက Secondary ပြီးစီးအကဲဖြတ်ဘို့တို™. အဆိုပါ TASC စမ်းသပ်ဖြတ်သန်းသင် USA တွင်အထက်တန်းကျောင်းကနေဘွဲ့ရသူတစ်ဦးကဲ့သို့တူညီသောအသိပညာနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုရှိသည်ပြသ.
အတော်များများကအမေရိကန်များနှင့်ဒုက္ခသည်များနှင့်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူအထက်တန်းကျောင်းမပြီးနိုင်ခဲ့ကြသည်. အထက်တန်းကျောင်းဒီပလိုမာမပါဘဲ, ဒါကြောင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌အကောင်းတစ်ဦးအလုပ်ရအောင်မြင်ဖို့ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်. သင်တို့မူကား, TASC စမ်းသပ်လွန်သွားလျှင်, သင်တစ်ဦးဒီပလိုမာရ (လက်မှတ်) သင့်ရဲ့အခြေအနေမှ. ဒါဟာအထက်တန်းကျောင်းတခုတော့ဟုခေါ်သည် (HSE) ဒီပလိုမာလက်မှတ်, ဒါကြောင့်သင်တစ်ခါတစ်ရံတွင်သင့်ရဲ့စမ်းသပ်ထားတဲ့ HSE စမ်းသပ်မှုအဖြစ်ရည်ညွှန်းတွေ့မြင်သို့မဟုတ်နားထောင်မည်အကြောင်း.
အဆိုပါ TASC ဒီပလိုမာသင်နှင့်ညီမျှပြီပြောပါတယ် (အတူတူ) အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိအထက်တန်းကျောင်းပြီးစီးခဲ့သူတစ်ဦးအဖြစ်ကျွမ်းကျင်မှု. ဒါကကြီးမားတဲ့အောင်မြင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်! မသာသင်တစ်ဦးပညာရေးရရှိပါလိမ့်မယ်, သင်မူကား, ပိုကောင်းတဲ့အလုပ်အကိုင်အရွေးချယ်မှုရှိသည်လိမ့်မယ်.
အဆိုပါစမ်းသပ်မှုနာရီပေါင်းများစွာ ယူ. အတော်ကြာသည့်အကြောင်းအရာများသို့ကွဲပြား. သငျသညျသီးခြားရက်ပေါင်းပေါ်တွင်အကြောင်းအရာများယူနိုင်ပါသည်. သင်တစ်ဦးကကွန်ပျူတာပေါ်တွင်သို့မဟုတ်စက္ကူပေါ်မှာစမ်းသပ်ယူနိုင်ပါသည်.
စမ်းသပ်မှုအပေါ်ငါးခုဘာသာရပ်များရှိပါတယ်: လူမှုရေးလေ့လာမှုများ, သိပ္ပံ, သင်္ချာ, စာဖတ်ခြင်းနှင့်စာရေးခြင်း. You will answer many questions about all these topics.
သင်လုပ်နိုင်သည် စမ်းသပ်မှုအဘို့အလေ့လာမှု. သင်တို့သည်လည်းလုပ်နိုင် find out how to take the test.
အဆိုပါ RCO’s free online TASC/HiSET/GED® အတန်း စမ်းသပ်မှုအပေါ်တစ်ဦးချင်းစီဘာသာရပ်ကိုဖုံးလွှမ်း. သငျသညျအဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီအခါတိုင်းသင်တစ်ဦးလူတန်းစားစတင်နိုင်ပါသည်. အများစုမှာကျောင်းသားများကနှစ်လမှနှစ်ပတ်အတွင်းတဦးတည်းဘာသာရပ်ပြီးစီး. သငျသညျအချိန်မရွေးစတင်ရပ်တန့်နိုင်ပါတယ်. သငျသညျသင်ခန်းစာများကိုပြန်လည်ယူနိုင်ပါတယ်. သငျသညျသငျနှငျ့အတူစတင်ချင်ရာဘာသာရပ်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်.
သငျသညျတိုင်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ TASC စမ်းသပ် ယူ. မသွားနိုင်. သင့်ရဲ့ပြည်နယ်အတွက်ကမ်းလှမ်းခဲ့သောစမ်းသပ်ရှာဖွေဖို့အောက်ကစားပွဲမှာကြည့်ပါ.
သင့်ရဲ့ပြည်နယ် TASC ပူဇော်မပါဘူးဆိုရင်, သင်ဆဲဒီပလိုမာရနိုင်. You can take the HiSET test or the GED® သင့်ရဲ့ပြည်နယ်အတွက်စမ်းသပ်. အရာတစျခုကိုမြင်ပြန်စားပွဲ၌ကွညျ့ရှု.
အဆိုပါ GED® စမ်းသပ်မှု TASC စမ်းသပ်မှုကဲ့သို့ဖြစ်၏. အဆိုပါ GED ဖြတ်သန်း® စမ်းသပ်မှုသင် USA တွင်အထက်တန်းကျောင်းကနေဘွဲ့ရသူတစ်ဦးကဲ့သို့တူညီသောအသိပညာနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုရှိသည်ပြသ.
အဆိုပါ HiSET စမ်းသပ်မှု GED ကဲ့သို့ဖြစ်၏® စမ်းသပ်. အဆိုပါ HiSET ™ဒီပလိုမာသင် USA တွင်အထက်တန်းကျောင်းပြီးစီးခဲ့သူတစ်ဦးကဲ့သို့တူညီသောအသိပညာနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုရှိသည်ပြောပါတယ်.
အဆိုပါစမ်းသပ်မှုယူ, သင်တစ်ဦးစမ်းသပ်စင်တာကိုသွားရန်ရှိသည်. You can take test onacomputer or on paper.
သငျသညျယခုစမ်းသပ်မှုရှောက်သွားဖို့အဆင်သင့်လျှင်ကြည့်ရှုရန်အလေ့အကျင့်စမ်းသပ်မှုယူပါ, သို့မဟုတ်သင် sign up ကိုမရောက်မီပိုပြီးလေ့လာချင်တယ်ဆိုရင်.
Find the information you need to register for and take the TASC test. သငျသညျအပေါငျးတို့သဘာသာရပ်များလွန်သောအခါ, သင်တစ်ဦးဒီပလိုမာကိုလက်ခံရရှိပါလိမ့်မယ်.
ငါသည်အခြားနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကနေဒီပလိုမာများ. ငါဆဲ HiSET ရသင့်တယ်, TASC သို့မဟုတ်GED®အထောက်အထားများ?
သင်တစ်ဦးအထက်တန်းကျောင်းဒီပလိုမာရှိပါက, သင်သို့မဟုတ်မပြုစေခြင်းငှါတစ် HiSET လိုအပ်နိုင်ပါသည်, TASC သို့မဟုတ်GED®အထောက်အထားများ. သင်တို့မူကားကောလိပ်ကျောင်းကိုသွားဒါမှမဟုတ်အလုပ်တစ်ခုရဖို့ရန်သင့်အားကျောင်းမှပြီးဆုံးအထောက်အထားလိုအပ်နိုင်ပါသည်. သငျသညျအထောက်အထားမရှိပါက, USA တွင်ဒီပလိုမာရတဲ့သင်ကူညီကြလိမ့်မည်.
How to take the TASC စမ်းသပ်
အဆိုပါ TASC စမ်းသပ်မှုအပေါ်ဘာလဲ?